♪ Angel Shaper: ပြည်တော်ပြန်သူအတွက် နှုတ်ဆက် စကားလုံးများ
ကောင်းသော လိုရာတွေ ပြည့်ပါစေလို့ ထပ်မံ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
မှတ်မှတ်ရရ အမြဲ ရှိနေသေချာတယ် ညီမလေးရေ..ပြန်ဆုံကြမှာပါ။
15 November 2009 at 12:16
အင်း နူတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ်
ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ချစ်ညီမရယ်..
ဘာလည်းးးး နောက်ဆုံး ဆိုတာ ..
နောက်ဆုံးးးး မဟုတ်ဖူး နော် ..
နောက်ဆုံကြရအုံး မှာ ....
ကျန်းမာချမ်းသာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝစေသား။
ဒီကနေပဲ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် သမီးကြီး ရေ ...
ပြောင်းလိုက်ပါလားခင်ဗျ " ပြန်တော်ပြန် မင်းသမီးလေး
အတွက် စကားလုံးလက်ဆောင်များလို့" မကိကိပြောတာ
လေးသတိထားမိလို့ ပါ ကြုံကြအုံးမယ် မှာ ဒီတစ်မိုး
အောက်မှာရှင်သန်နေကြတာဘဲ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်း
လေးပါ အောင်မြင် အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ . . . :)
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေ Dim
Email နဲ့ ပို့ပေးမယ်နော်...
တိတ်.. တိတ်.. တိတ်...
ဘယ်နေရာပဲသွားသွား.. ဘယ်ပဲရောက်ရောက်..ဘလော့ခ်ကိုတော့ ပစ်မထားပါနဲ့ဗျာ.. နော်..း)
16 November 2009 at 03:07
မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးပဲ ဘလော့ပေါ်မှာ ခင်မင်ခဲ့ရပေမယ် ဘယ်လိုကြောင့်မှန်းမသိ သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်မိတယ်..
ခုလို နှုတ်ဆက်စကားကို မကြားချင်ပေမယ့် ဒါက သဘာဝပါလေ..
တကယ်ပြောတာပါ ဘလော့သက်တမ်း သိပ်မကြာသေးပေမယ့် ခင်မင်မိတဲ့သူတွေအပေါ် သံယောဇဉ် ကြီးခဲ့မိတယ်..
မပြန်ခင်လေး ကျွန်တော့်ဘလောဂ်ကို ရောက်အောင် လာသွားတာလည်း.. ခင်မင်မှုရဲ့ သဘောကို ပြနေတာပဲလေ..
နှုတ်ဆက်စာတွေကို လိုက်မဖတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် ဖတ်မိပြန်ပေါ့..
အရာရာကို သတိကပ်ပြီး ဘာလုပ်လုပ် အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲ သတိပေး ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..
16 November 2009 at 03:18
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ သမီးကြီးရေ...
မျှော်လင့်နေတဲ့ အိပ်မက်လေး အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ခန ဝေးရတာလို့ပဲ မှတ်ပါ သယ်ရင်းလေးရေ
ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပီး နေကောင်းအောင်နေပါ
ခနတာ ဆုံခဲ့ပေမဲ့ တို့တွေရဲ့ ခင်မင်မှုတွေက ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟာ နော်
ညီမလေး စာလေးတွေ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်။
ပြန်ခါနီး...အစ်ကို့ရဲ့ ဘလော့ဂ် ခပ်စုတ်စုတ်လေးကို လာမလည်နိုင်ခဲ့တာ အလုပ်တွေ သိပ်ရှုပ်နေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်...။ ဟုတ်တယ်..ဟုတ်...။
(စာတွေရေးဦးနော့်...။ ဗမာပြည်ကနေ ကျော်ခွပြီးတော့...လေ...)
16 November 2009 at 06:55
သူများတွေ အမှတ်တရ ရေးတာလေးတွေ ဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာ တကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
တကယ်ဆို သူတို့က အမြဲတွေ့ဆုံနေလို့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရေးကြတာလေ။
ငါတို့တွေလည်းမတွေ့ခဲ့ကြပေမယ့် ပါးလုံး တို့
၀က်ကလေးတို့နဲ့ ညတွေမှာ ဂရုချက် ပြီး ရယ်မော ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာ မမေ့နိင်တာသေချာပါတယ်။
ဒီလို ဘ၀တွေပြန်ရဘို့ လွယ်ပါ့မလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားပါ ဖြစ်လာသမျှကို တည်တည်ငြိမ် ငြိမ် ဖြေရှင်းပါ ။
ဒါက ပိုလီယို ဆိတ် လေးကို ထပ်နှုတ်ဆက်တာပါ
ညီမ Angel Shaper,
အခုမှပဲတွေ့ဖူးတယ် ညီမ ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။တကယ်လို့ပြန်ဆုံခဲရင် " မှတ်မိအုံးမယ်ထင်ပါတယ် ရက်တွေ လတွေက အတော်ကြာပြီပဲ "
ညီမကြိုက်တတ်တဲ Jasmine Tea နဲ.ကြိုဆိုနေမှာပါ။ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ကိုမျိုး ( Noodle House BJC ).
Dear my lovely sis Dim
Wherever you go,we never forget you and your lovely karaoke sound .Wherever you live,we ever miss you from Dubai.Haveanice trip.Pls keep in touch for all of us. We are keep and pray for your future.
Ko Chan's family
Online friends are people we may never meet.... We see pictures, we see cams...It isn't the same.... We grow close...We care and love one another.... One day we may not hear from one another.... Our hearts will break... All we see isaname on messenger but the person we don't see anymore..... We pray....."Please come back".... All I ask is you remember me in the good times we had..... Keep me close to your heart....Friends forever....